Loltoonni MKII, humna ABUT waraanuuf bobbaafamanii baqatan danuun ajjeefamuu - Independent Oromia
Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee Impaayerattii garaagaraa keessaa gamasitti bobbaafaman danuun hidhannoo isaanii gatuun, gamisnis hawaasa naannootti gurgurachuun, baqachaa jiraachuu. Loltoota kanneen keessaa kanneen qabaman, kaan qaamotaa fi loltootuma MKII’n battala ajjeefamuu; kaanis to’annoo ajajoota waraana MKII jala galfamuun miliqfamuu.
Oromoon Walloo ABUT akka waraanuuf dirqamsiifamuun gamas geeffamaa jiraachuu
Waraana garee humnoota Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, gam-kaaniin immoo, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) gidduutti geggeeffamaa jiru irratti, gara garee humnoota MKII fi Mootummaa Naannoo Amaaraa goruun humna Naannoo Tigiraay akka waraananiif jecha, Oromoonni Walloo dirqamsiifamuun mooraa leenjii waraanaatti galfamaa jiraachuu.
Haaluma kanaan, Oromoonni baay’inaan 50 olitti tilmaamaman, Roobii Adoolessa 21, 2021, Magaalaa Baateetti walitti qabamuun Buufata Poolisii Ona Baatee keessa erga bulfamanii booda, borumtaa isaa konkolaataa lamatti fe'amuun gara mooraa leenjii waraanaa Xiixaa jedhamuutti geeffamuu.
Hidhaa fi ajjeechaa Uummata Oromoo irratti, maqaa gargaarsa WBO’n
Maanguddoon Oromoo, Obbo Addunyaa Amantee, WBO gargaarte jedhamuun, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar, Ona Gindabarat keessatti hidhamuun dararamaa erga turee booda, Kamisa Adoolessa 22, 2021 mana hidhaa san keessaa baafamuun ajjeefamuu, sirni awwaalchaa isaas Sanbata kaleessaa, Ona Gindabarat Ganda Gammadaa jedhamutti kan raawwatame ta’uu.
Gama biraatiin, hidhaa fi dararaan Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Uummata Oromoo irratti maqaa gargaarsa WBO’n raawwatamu, Ona Gindabarat keessatti akka hammaatetti itti-fufee jiraachuu.
Odeessa guutuu suur-sagalee armaan gadii irraa hordofuu ni dandeessu.